Nkọwapụta --lọ ọrụ - SHENZHEN KAISHENG PCB CO., LTD
PCBFuture-agba mbọ na-ezitekwara elu àgwà na akụnụba Otu-Kwụsị PCB nzukọ ọrụ niile ụwa ahịa. PCBFuture ka ulo oru site SHENZHEN KAISHENG PCB CO., LTD na emi odude ke ererimbot electronic center Shenzhen China.
KAISHENG PCB guzosie ike na 2009, bụ otu n'ime ụwa na-eduga e biri ebi circuit iba n'ichepụta ụlọ ọrụ. Iji nye-eri-irè na magburu onwe ahịa ahụmahụ, KAISHENG enye turnkey PCB nzukọ ọrụ gụnyere PCB layout, PCB n'ichepụta, Components sourcing na PCB nzukọ ahịa. PCBFuture bụ enyemaka ụdị nke KAISHENG uche na otu nkwụsị PCB nzukọ ọrụ.
Ebe ọ bụ na ya oruru, PCBFuture ka tumadi nyere turnkey PCB nzukọ ọrụ maka ndị ahịa na Europe, America, Canada, Japan, Korea wdg Site ngwa-n'aka prototyping, ala olu elu mix ka elu ibu mmepụta, anyị mgbe niile na-n'uche na top mma, na nnyefe oge, ọnụahịa asọmpi na ọrụ impeccable bụ naanị ụzọ iji merie iguzosi ike n'ihe gị. Nke a na - enye gị ohere, onye ahịa a na - asọpụrụ, ilekwasị anya na isi azụmaahịa gị na - ejide n'aka na mkpa gị dị na aka na aka ọkachamara.
PCBFuture na-aga n'ihu na-amịpụta teknụzụ dị elu na mpaghara na mba ọzọ, ma nakweere ngwa ọrụ SMT dị elu site na Japan na Germany, nke dị ka igwe ntinye ngwa ngwa ngwa ngwa, igwe akụrụngwa akpaka yana igwe 10 re-flowering igwe Anyị PCBA mgbakọ na dustless omumuihe na-ekwe nkwa site AOI na X-ray nchọpụta. Anyị bụ ndị n'ụzọ zuru ezu conformance na ISO9001: 2015 àgwà management usoro, niile na sekit na sekit mbadamba ga-n'okpuru electric ule tupu itinye ka SMT nzukọ edoghi, na ihe nile PCBAs nwekwara ike nwalere ma ọ bụrụ na ina tupu nnyefe. Ọganihu Na-aga n'ihu bụ nke ọdịbendị ụlọ ọrụ anyị, ọ ga-abụkwa nke gị, nke na-eme ka mmekọrịta dị ogologo oge na nke siri ike n'etiti anyị.
Anyị nwere obi ụtọ ịchụpụ ndị ahịa anyị na anyị ka anyị nwee ihe ịga nke ọma site na ndị otu ọkachamara anyị nwere ahụmịhe bara ụba, ezi obi na nlezianya. Ndị ọrụ anyị nwere ike inyere ndị ahịa aka ịnye ngwọta agbakwunyere site na tupu ahịa na ahịa. Anyị na-eri ajụjụ ọkachamara nwekwara ike na-arụ ọrụ na gị na ike ndị kasị na-eri irè ngwọta gị prototyping usoro.
Ọkachamara, Mgbanwe na ntụkwasị obi bụ obi otu anyị si egbo mkpa ndị ahịa anyị. Anyị kwenyesiri ike na ị ga-enwe afọ ojuju kpamkpam ma ọ bụrụ na gị na gị rụọ ọrụ. Ka anyị nwee ọ enjoyụ n'ọrụ ahụ ma tolite ọnụ.